इन्टरनेट ‘स्लो’ भएर हैरान हुनुभएको छ ? यसो गर्नुहाेस् - Saptakoshionline
इन्टरनेट ‘स्लो’ भएर हैरान हुनुभएको छ ? यसो गर्नुहाेस्
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६ समय: १०:१७:५४
सस्क्राइब गरेको प्याकेज सर्भिस प्रोभाइडरले सम्झौता गरेअनुसार छ/छैन परीक्षण गर्नुपर्छ । यो थाहा पाउन इन्टरनेटमा विभिन्न टुलहरू पाइन्छ । तर, सबै टुल सतप्रतिशत भरोसायोग्य नहुन पनि सक्छ । त्यसलाई साधारण आधार मान्न सकिन्छ । त्यसलाई कन्फर्म गर्ने अरू तरिका विशेषज्ञमार्फत गर्न सकिन्छ ।
कन्टेन्टहरू डाउनलोड गर्दा क्षेत्रगत रूपमा जति टाढाबाट डाउनलोड हुन्छ, त्यति नै स्लो हुने सम्भावना रहन्छ । कन्टेन्ट भएको सर्भरको क्षमताले पनि त्यसमा असर गर्छ ।
कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवाका विषयमा विद्यमान ग्राहकहरूसँग सोधपुछ गरेर आइएपी सेवाप्रदायक छनोट गर्नुपर्छ ।